WISTERIA: BEERITAANKA IYO DARYEELLIDA LIANA QURXINTA - SOOSAARKA DALAGGA
WisteriaWaxaa laga yaabaa in warshadda ugu quruxda badan dhulka. Yaa ku raaxeystay ugu yaraan hal mar nolosha si uu u fikiro ubaxiisa oo uu dareemo caraf udgoonkiisa gaarka ah, wuxuu maskaxda ku hayaan daqiiqaddan cajiibka ah ee nolosha. Duufaannada ugu quruxda badan ee dabiiciga ah ee wisteria waxay gaari karaan ilaa nus mitir, waxay ku daboolaan warshadaha xayawaannada jilicsan, oo hal dhinac oo iyaga ka muuqda waxay u muuqataa in ay hoos u dhacday sheeko cirfiid ah.
Wisteria: Goobta Dhirta
Wisteria - Liana qurux badan oo laaluush ah, kaas oo leh muuqaal firfircoon oo caleemo leh oo caleemo buluug ah, lilac ama pylish inflorescences. Waa ubax lagu raaxaysto oo wisteria sameeyey si cajiib ah in dalkiisa.
Wisteria, ama wisteria, waa wakiil caan ah oo ka soo jeeda geedo xayawaan ah oo geed leh oo ka tirsan qoyska legume. Inta badan dhirta noocyada noocaan ah waxay si gaar ah ugu koraan cimilo diirran oo diiran.
Bannaanka beeraha si guul leh ku beerta sariiro ay wisteria ubax iyo wisteria Chinese.
Ma taqaanaa? Marka la abuuro xaaladaha ugu raaxada leh, dhererka dhererkiisu wuxuu gaari karaa ilaa 10 mitir.
Wisteria Shiine ah waa ka badan oo udgoon, laakiin baraf u adkaysta yar, halka qaraabada weyn ee ubaxu u adkeysan karaan dhibco heer kulul ilaa -23 digrii.
Waxa aad u baahan tahay inaad tixgeliso markaad beerto geedo
Wisteria ayaa aad u nugul hawada wasakheynta hawada, sidaa darteed dhirtu si fiican ayey u kori kartaa meelaha kaliya ee lagu tilmaamayo xaalado degaan oo wanaagsan. Dhirta ubaxyada kaliya ee shan sano ka dib markii laga beerto abuurka, gooyn ama gooyn. Xeebeedka dabacsan ee dabacsan iyo ciidda si fiican u da'ay waxay ku habboon tahay beeritaanka wisteria, taas oo qoyaanku uusan istaagi doonin.
Dhirta Beeraha lagu soo saaro qoryaha diyaarsan ee cabbirka 60/60/50. Daryeelida warshad ma qaadato wakhti iyo dadaal badan. Si aad uhesho wisteria si fiican u koraan oo u kobciso sida caadiga ah, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso waraabin tayo leh oo aad u fara badan.
Waa muhiim! Si ay dhirtu ugu raaxeeysato ubax deeqsi ah, waxaa lagu talinayaa in la gooyo caleemaha. Fikrad ahaan, dhererka wabiyada wisteria waa inuusan ka badnaan 30 sentimitir.
Haddii dhirta laga beeray gobollada waqooyi, ka dibna si ay u qabato xilliga qaboobaha aan waxyeello, waxaa lagu talinayaa in si taxadar leh u daboolaan duurka. Sababtoo ah xaqiiqda ah in caleemaha of wisteria aad u culus, waxaad u baahan tahay inaad ka walwasho ku rakibida bacaha xitaa ka hor bilaabashada ubax.
Waa muhiim! Wisteria si dhakhso ah ayey u koreysaa, sidaa daraadeed waxaa mararka qaarkood lagama maarmaan u ah in la baadho duurka dhowr jeer xilli ciyaareedkan.
Liana waxaa lagu gartaa jacayl loo yaqaan 'pathological light of light', sidaa daraadeed waxa ay si aan fiicnayn u dhalataa shucaac ultraviolet. Wisteria iftiin-iftiin ah, oo koray iftiin hoose, uma badna inay awoodaan inay ku farxaan ubaxyo deeqsi ah, midabo cad oo iftiin leh iyo xoojin firfircoon oo horumarineed.
Dhirta oo aan si joogto ah u dhigin iftiinka qorraxda, waxay u muuqataa daciif iyo xanuun, mararka qaarkoodna iftiin la'aantu waxay noqoneysaa sababta ugu weyn ee dhaqanka diidan yahay inuu ubaxsado.
Muxuu noqon karaa qoyaanka iyo heerkulka koritaanka guuleysta
Liana waa mid diirran, sidaas darteed waxay dareemeysaa meelo badan oo ka mid ah meelaha lagu garto xagaaga kulul. Inkasta oo dabeecada wanaagsan ee kuleylka, wisteria weli ma u dulqaadan heerkulka si fiican 35 digrii. Si ay dhirtu u adkaato jiilaalka wanaagsan, caleemaha waxay u baahan yihiin inay si taxadar leh u duubaan, gaar ahaan difaaca barafka ee jirridda geedka.
Haddii xayawaankaagu uu leeyahay dalagyada gudaha, ka dibna xilliga qaboobaha waa in lagu beeraa gudaha heerkul ah +10 darajo. Kobcinta wisteria ee xaaladaha Spartan waxay ka hortagi doonaan ubaxeeda dhicis ah.
Waa muhiim!Marka koray gudaha, geedka uma baahna buufin dheeraad ah. Si kastaba ha noqotee, markaad beerayso wisteria qol ay ku jirto dabeylaha, taas oo ay sababtuna tahay hawada ka baxday, miirista duurka ayaa loo isticmaali karaa in lagu nadiifiyo bey'ada, ama taangiyada biyaha ayaa lagu rakibi karaa xiga geedka.
Sida loo aaso wisteria
Markaad beerto wisteria, dareen gaar ah waa in la siiyaa doorashada goobta: waa in si fiican looga ilaaliyo qoraallada iyo noqdaan qoraxdu. Waxaa macquul ah in lagu beero geedo glyciniis dhinaca koonfureed, waana muhiim inaad hore u sii fekerto meesha taageerada.
Waa muhiim! Liana ma aha mid aad u cakiran oo ku saabsan ciidda, laakiin dhirta waxay dareemeysaa raaxo leh nafaqo, nafaqo leh iyo lime aan lahayn.
Beerto waxaa lagu fuliyaa godka la diyaariyey, kaas oo hore loogu soo daray maaddada compost. Ka dib markii la beero, wuxuu u baahan yahay inuu hubiyo in tayada biyaha ee ugu sarreeya.
Ma taqaanaa?Ha baqin haddii geedka canabka ah uu joojiyo koritaanka marka hore. Laakiin ka dib markii la qabsashadu ay dhaaftay, waxay kugu yaabi doontaa si aad u firfircoon oo horumar leh.
Wisteria soo saarka by layered sidoo kale waa mid aad u caan ah ee beerta. Sida guntooda loo isticmaali karaa caleemaha sannadkii hore. Guga hore, caleemaha waxaa la dhigay si qumman ee dusha sare ee dhulka iyo daboolay dhulka.
Waa muhiim! Laga soo bilaabo geedka hooyada caleemaha xidid waa la kala saari karaa aan ka hor sanad.
Sida loo abuuro wisteria laga bilaabo abuur
Abuurista miraha glycine waxaa la qabtaa bisha Nofembar ama horraantii Disembar. Seeds waxaa lagu beeray dusha sare ee substrate ah oo ka kooban xaashi, ciid ballaaran oo ciid ah oo lagu qiyaaso 4 x 1 x 1. Ka dib marka la beero, waxaa lagu talinayaa in lagu daboolo abuurka lakabka ciidda oo aan ka badnayn 1-2 millimitir dherer.
Ka dibna ku buufin leh buufin biyo ah oo daboolo weelka dhalada leh ama gabal polietene ah si loo abuuro mikroclimate optimal. Weelka ku rid meel diiran, heerkulka taas oo ka duwanaan karto 22 ilaa 25 darajo.
Waa muhiim! Ilaa abuur ah Gagaash, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in ciidda ee weelka uusan engegin oo si joogto ah ku jira xaalad yar oo qoyan..
Caleemaha ayaa soo bixi doona 3-4 toddobaad kadib, kadib 7-10 maalmood kadibna weelka caleemaha leh waxaa loo rogi karaa in badan oo iftiin leh, laakiin laga ilaaliyo meel qorraxdu si toos ah u ilaaliso.
Ka dib markii ay soo baxaan caleemaha laba caleemo, waa la quusiyey oo la isku shubay leh buro dhoobo ah oo ku jira weel gaar ah, ka dibna la waraabiyay xal daciif ah oo ah kaneecada.
Xeerarka daryeelka ee dhirta ornamental
Xitaa jilicsan ayaa la qabsan doona daryeelka dumarka quruxda badan. Wisteria loria loria, beeritaanka iyo daryeelidda taas oo aan u baahnayn in aad leedahay aqoon gaar ah, waxaa lagu kala soocay qulqul aan ka madax banaan. Warshadu waxay qadarineysaa ubaxa deeqsinimada oo keliya marka la beero meelaha lagu nadiifiyo oo laga ilaaliyo dabaysha.
Marka koritaanka wisteria, waa inaad si joogto ah u xirtaa caleemaha qallafsan. Si ay dhirta si ay ugu raaxaystaan ​​ubax firfircoon, caleemaha waxay u baahan tahay manjooyin joogto ah.
Waa muhiim! Marka beerista canabkiina waxay u baahnaan doontaa in la hubiyo in xididaduhu aanay qalalayn, haddii kale waxay sameyn doontaa tiro yar oo ah burooyinkeeda ubaxa, taas oo horseedi doonta hoos u dhac tirada tirada inflorescences.
Wisteria waxay jeceshahay qoyaan, laakiin waxay si aan fiicnayn uga waraabisaa waraabinta xad dhaafka ah. Si loo go'aamiyo in ay tahay waqtigii lagu baadhi lahaa baadiyaha, isku day in aad ku cadaadiso ciidda xaydaankaada, haddii ciidda si fudud loo eego qaabka laqoray, iyo marka si adag loo jajabiyo, wakhtiga waraabinta weli lama gaadhin. Haddii aad ku guul daraysato inaad sameysid boodhka carrada, dhirta ayaa u baahan tahay waraabinta.
Waa muhiim! Xasuusnow, la'aanta qoyaanka waxay keeni kartaa wisteria si ay u bilaabaan inay ubaxaan ubaxyada.
Marka koray gudaha gudaha ama meelaha ay astaamuhu ku diirsadeen, kuleylinta geedku wuxuu joojiyaa Diisambar wuxuuna bilaabaa inuu u diyaariyo jiilaalka.
Sidee iyo goorta la cunayo wisteria
Wisteria - waa liana ballaadhan oo ballaadhan, si markaas loo waraabiyo dhirta hodanka ah oo dhan muddada koraysa, waxay u baahan tahay hordhac wakhti goyn ah. Marka quudinta wisteria leh Bacriminta macdanta adag, waxaa lagu soo bandhigay sida soo socota: 10 litir oo biyo ah oo leh 20 grams oo bacrimin ah oo lagu qasi jiray waxaa lagu isticmaalaa halkii 1 m² oo dhul ah.
Sidoo kale, Liana ayaa si fiican u jawaabi doonta hirgelinta tincture ee digada lagu beeray ee lagu diyaariyey heerka xajmiga 1 x 20 ama xiirta timirta (100 garaam oo budada cagaarka ah oo qalalan ayaa lagu burburiyaa hal baaldi biyo ah).
Bannaanka u badan ma garanayaan sida si wanaagsan loo gooyo wisteria. Laakiin waxay ku xiran tahay saxda ah ee manjooyin sida deeqsinimo leh geedka canabka ah Bloom. Wisteria gooyaa ayaa lagu sameeyaa celcelis ahaan laba jeer sannadkii.
Ka dib markii laga beerto, waxaa lagama maarmaan ah in la jarjiro boodhka ugu weyn ee dhaqanka si buro xoog leh. Sidoo kale, dhammaan caleemaha lateral waa la gooyaa, taasoo kicinaysa horumarka asaasiga ugu weyn.
Sannad kowaad, xagaaga ee duurka qalooca, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in biqil ugu weyn ee ku yaalaan vertical, iyo labada kale - xagal ah oo ku saabsan 45 digrii.
Sannadka labaad ee xilliga qaboobaha, asaaska udubdhexaadka ah ayaa u baahan doona in la gaabiyo si dhererkeedu uusan ka badnayn 80 sentimitir. Ka dib markaa waxaan samaynaa laba caleemood oo dheeraad ah oo ka gaabiya sadexaad.
Xagaaga soo socda, waxaan xirnaa stem ugu weyn ee geedka canabka ah si taageero, dooro laba caleemo dheeraad ah oo ku xir xagasha siman 45 darajo. Xaaladda haddii caleemaha dheeraad ah ay bilaabaan inay sameeyaan saldhigga warshadda, waa in laga saaraa.
Marxaladda soo socota, waxaan xireynaa qaabka cusub ee la sameeyay iyo in la gooyo dhammaan laanta amarka labaad ilaa 20 sentimitir.
Waa muhiim! Sannad saddexaad, iyo sidoo kale sanadaha soo socda, waxaa lagama maarmaan ah in la fuliyo dhamaan tallaabooyinka kor ku xusan ee loogu talagalay horumarinta tooska ah ee geedka.
Habka ugu fudud ee loo wado Wisteria - kala qaybinta baadiyaha. Habkani wuxuu ku habboon yahay dhirta dhalinyarada ah, oo ah 3 ilaa 5 sano jir. Dhaliddii hore waxay ku burburaan dhinac hal dhinac ahna qaybo kooban oo ka mid ah geedka loogu talagalay transplanting.
Beeraleydu waxay sheeganayaan in beeritaanka wisteria guga ay noqon doonto mid aad u guuleysato, sababtoo ah xagaaga xagaaga dhirta waxay yeelan doontaa waqti ay ku qaadato xidid iyo koraan xoog.
Bannaanka u badan dacaayad guntimaha wisteria. Markaad fulinayso falkan, dhirta geedaha qaangaarka ah waa la burburin karaa, iyada oo la jarayo dhammaan xididdada la heli karo saddex meelood meel.
Dhammaan xididdada waaweyn waa la jaraa si toos ah kolka xididka, ka dib markii wisteria lagu daro dhibicda iyo ciidda cusub nafaqada cusub ayaa daruuri lagu daraa godka.
Ma taqaanaa? Ficilada noocan oo kale ah waxay keeni karaan naxdinta dhirta, taasoo kicinaysa qaabka aasaasida. Xaglaha cusub ee liyuubyada waxaa lagu kala soocaa karti sare si firfircoon loo sameeyo burooyinkeeda cusub, kuwaas oo caleemaha dhalinyaradu ay horumarin doonaan mustaqbalka.
Sannadka soo socda, baadiyaha waa in mar labaad la wiiqo oo xididdada yar yar ee collar xididka, taas oo markaa loo isticmaali doonaa si loo xoqo.
Waxaa lagama maarmaan ah in la doorto oo kaliya xididada aan ahayn mid ka yar calaamad oo leh dherer 10 illaa 15 sentimitir. Marxaladda soo socota, xididdada la soo xulay waxaa lagu daaweeyaa fungicides waxaana lagu beeray nafaqo carruureed leh.
Muddadan, guntooda u baahan tahay waraabin dhexdhexaad ah. Xilliga dayrta, waxaa lagu tallaalaa meel joogto ah ama koronto si ay u koraan.
Cudurada iyo cayayaanka wisteria
Ma taqaanaa? Sababtoo ah sifooyinka sunta ee wisteria ma aha mid u nugul caabuqa cayayaanka iyo cudurada.
Laakiin mararka qaar ayaa geedka canabka ah waxaa soo weeraray aphid cagaaran, oo lagu burburinayo iyaga oo isticmaalaya xal saabuun-ash ama daawada cayayaanka ee "Tanrek".
Cayayaanka kale, oo aan ka cabsan guryaha suntan ee wisteria, waa caarada dhirta. Si loo ilaaliyo warshadda kiiskan, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo daroogada "Karate Zeon".
Diyaarinta geedka jiilaalka
Ka dib markii manjooyin xilliga dayrta si loo ilaaliyo duurka ka soo dhaxan, caleemaha leexay dhulka. Ka dib markii ay ka saareen taageerada, waxaan dhigi caleemaha on lakabka ah xumbo ama lapnik iyo dabooli laamihii caleemaha qalalan qalalan.
Waa muhiim! Caleenta maqaarka waxaa loo isticmaalaa in lagu daboolo qofka wayn, sababtoo ah ma aha mid qudha, taasina waxay muujineysaa in heerkulka hoos ku yaal uu sii degganaan doono.
Oak wuxuu ka soo baxaa korka waxaa lagu daboolay lakin lakin ama walax kasta oo daboolan. Feejignaanta laamaha geedka canabka ah waa in si tartiib tartiib ah, door bidaan in ay doortaan maalintan diiran. Waxay u fiicantahay in la sameeyo qalliinka ka dib qado, sababtoo ah waqtigaan xijaabku waa caag badan.
Visceria - warshad qurux badan, iyo haddii aad doonaysid inaad ku beerato geedkan geedka canjiga ah, waxaad u baahan tahay inaad si dhab ah u ogaatid sida loo daryeelo wisteria beerta. Warshadu waa wax aan qabyo ahayn, oo haddii aad ku hareeraysan tahay daryeel iyo taxadar yar, waxay hubaal ahaan kuugu farxi doontaa ubax deeqsinimo leh.